SOLAROLA tsy misy cassette solosaina | Solar Solve Marine
SOLAROLA® mangarahara mivantana amin'ny ranon-jiro / solomaso tsy misy kodiarana amin'ny alàlan'ny elo
SOLAROLA® solosaina manjelatra mareva-doko bola amin'ny SOLASAFE® masoandro. Mbola manome tombontsoa goavana toy ny SOLASAFE® masoandro ihany izy ireo saingy tsy manana ny Alim-borona fiarovana ala ary 'manadio' rindrina borosy. Ny sunscreens sunage SOLAROLA® dia azo antoka mandritra ny 2-taona ary tonga tanteraka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fantsom-pahalalana sy ny tariby fitarihana.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny SOLAROLA® masoandro dia ahitana:
• Fanatsarana ny fahitana sy fiarovana - ahena hatramin'ny 93% ny famirapiratanana hahazoana antoka ny fahitana mazava sy ny fitetezana azo antoka.
• Voatazona ny famolavolana loko tena izy ka mora fantarina ny marika sy ny fizotrana zavatra.
• Mihena ny fihenan'ny masonao - esorina ny olan'ny famirapiratana sy ny fisaintsainana ny tabilao elektronika. Mampidi-doza sy tsy mahazo aina ny masoandro ambany sy ny taratry ny rano sy ny ranomandry.
• Mamorona tontolo iainana mahasalama kokoa - mitazona ny mpiambina hatrany ary mitazona ny tahan'ny asa amin'ny fandavana hatramin'ny 87% * ny hafanan'ny masoandro.
• Miaro ireo faritra mibaribary amin'ny vatana - farafahakeliny 98% ny hazavana UV manimba dia voasivana.
* (Ny tombony lehibe indrindra dia azo tanterahana amin'ny fametrahana ireo efijery SOLAROLA amin'ny varavarankely rehetra)
Ny endri-javatra hafa amin'ny solarmola solarola®:
• Antoka tsy misy fepetra mandritra ny 2 taona
• Mora apetraka, tsotra ampiasaina
• Safidin'ny rafitra fandidiana sy ny lokon'ny sarimihetsika
• Natao handrefesana
• Masoandro eto amin'izao tontolo izao ihany no karazana nankatoavin'i Lloyd's, DNV, ABS ary RINA
Noho ny haben'ny endriny ivelany volamena ary Silver no sarimihetsika maivana indrindra amin'ny masoandro. Raha tsy mety ny fisehoana ivelany dia manoro hevitra isika Gray sarimihetsika ho safidy manaraka tsara kokoa.
% Reduction Glare (Anti Glare Effect) 93.2 92.6 91.2 84.1
% Ny angovo voajanahary manontolo nolavina (fanoherana ny hafanana) 87.2 77.8 65.7 67.6
Voaroaka ny jiro ultra Violet 99.3 97.4 98.6 98.5
% Total Transmission Solar 6 7 20 20
% Total Reflection Solar 48 32 21 22
% Absorption Total Solar 46 41 59 58
Fahazavana hita maso 6.1 6.6 7.9 14.2
Ny haavon'ny fehezan-dalàna farafahakeliny sy farafahakeliny dia miankina amin'ny karazana fandidiana ary aseho etsy ambany ao amin'ny mm.
Loharanon-tseranana mihenjana 3500 3500 400 250
Page 1 3500 3500 350 250
Manolotra servisy 24 ora Fast Offpatch isika ho an'ny baiko maika. Ny SOLAROLA® dia navotsotra mba hametrahana azy amin'ny fametahana ny fametahana ho an'ny kofehy tsirairay. Manana tetikady miavaka izy ireo amin'ny fanorenana haingana sy mora amin'ny ekipan'ny sambo.